Soomaaliya oo yeelanaysa ciidamo la dagaalama Musuq-maasuqa
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya, Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed, ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku her-gelinayaan ciidamada la dagaalanka Musuq-maasuqa, oo uusan dalka lahayn tan iyo burburkii 1991-dii.
Jeneraal Bashiir ayaa xusay in ciidamadaan ay howshooda noqoan doonto inay dabagal iyo baaris qarsoodi ku sameeyaan Xafiisyadda Hay'addaha kala duwan ee dowladda si looga hortago Musuq-maasuqa baahsan ee xilligan dalka ka jira.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay ciidamada Booliska in aysan dhibaatayn Shacabka, islamarkaana ay u dhimriyaan, maadaama ay iyagu yihiin kuwa u adeega rayidka, loona xilsaarey inay sugaan amniga.
Hay'addaa dowladda Federaalka ayaa lagu eedeeyaa inay daah-shadeen Musuq-maasuq, taasoo sababta in sanad walba ay safka hore ka gasho Soomaaliya liiska dalalka ugu musuqa badan caalamka.
Go'aanlan uu ka dhawaajiyay Taliyaha Booliska ayaa loo arkaa mid wax ka bedali karta dhibaatooyinka Musuqa la xiriira, hadii si fiican loo dhaqan-geliyo.
Farmajo oo soo dhaweeyay go'aanka World Bank
War Saxaafaded 26.09.2018. 22:53
War Saxaafadeedka kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in...
XOG: Muxuu isku casilay xoghayihii Wasaaradda Garagaarka DF?
Soomaliya 09.08.2018. 02:36
Khayre oo dafiray heshiiskii Farmaajo iyo Abiy Axmed [DAAWO]
Soomaliya 21.06.2018. 10:47
Maxaa loo Magacaabi la'yahay Taliyeyaasha NISA iyo Booliska?
Soomaliya 01.02.2018. 21:23
Kaalinta Farmaajo iyo sii deynta Gudoomiyaha Xamarwayne
Soomaliya 09.09.2018. 13:08
Farmaajo oo Villa Somalia ku qaabiley Wafdiga Eritrea [Sawirro]
War Saxaafaded 13.08.2018. 16:35
Wasiir kamid ah Xukuumada Khayre oo la isku dayay in la xiro [Sababta]
Soomaliya 04.08.2018. 12:12
Haysom oo tooshka ku ifiyay Musuq-maasuqa iyo sida loo ciribtiri karo
Soomaliya 09.12.2018. 16:35
Dhaxal-sugaha Sacuudiga oo "wajihi kara" baaris ku aadan dilkii Khashoggi 19.06.2019. 13:24
Kenya oo xirtay askari dusiyey sawirada ciidamo qarax lagu dilay 19.06.2019. 12:32
Itoobiya oo soo saartay amar saameynaya safaaradaha 19.06.2019. 12:10
Trump oo bilaabay ololihiisii doorashada Mareykanka ee 2020-ka 19.06.2019. 08:58
Is-ugaarsiga malleeshiyada Roobow iyo Al-Shabaab oo waji cusub yeeshay 19.06.2019. 08:48
Dowladda Soomaaliya oo kordhisay cadaadiska maamulka Xaaf 19.06.2019. 08:21